Fitaovana antserasera hanaraha-maso ny fiovaovan’ny toetr’andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2018 3:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Italiano, Español, বাংলা, Swahili, English
Manomboka eny ifotony amin'ny ankapobeny ny fanaraha-maso ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Tany Alaska, Etazonia i James Balog, mpaka sary mba handrakitra ny fiempon'ny ranomandry. Azonao jerena ny valiny mahavariana ao amin'ny sariny amin'ity lahatsary ity:
Raha tsy manana fakantsary sarobidy sy fotoana handehanana any Alaska ianao dia misy fomba hafa hamakiana ny zava-niain'ny olona mitari-dalana.
Eny amin'ny fitarihan-dalana manoloana ny fiovan'ny toetrandro ny tetikasa mandrakitra ireo tantara voalohany momba ny fikorontanan'ny toetr'andro, ao amin'ny vondrom-piarahamonina indizeny, ao amin'ny nosy kely ary ny vondrom-piarahamonina marefo hafa. Ahitana fandraisana anjara vao haingana marobe avy amin'ny mailaka, indrindra avy any Azia Atsimo sy Afrika ny forum. Mpikambana iray sy mpanolo-tsaina momba ny fampandrosoana an'i Afrika, George Katunguka manoratra avy ao Oganda:
Tsy nahazo sehatra betsaka tao amin'ny fireneko Oganda ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro saingy ny fiovana tahaka izany sy ny fiantraikany dia tsapa fa tena maharary. Amin'ny taona 2025, dia mety hiatrika olan'ny rano i Oganda araka ny tatitra vao haingana momba ny loharanon-drano. Matin'ny hanoanana ny olona tahaka ny tranga vao haingana tany amin'ny Faritra Teso, Ogandà atsinanana; Misy fiovana eo amin'ny tontolon'ny rano, toy ny fihenan'ny haavon'ny farihy Victoria; vanin-taona tsy ampoizina, fahaverezan'ny fahavokaran'ny tany sy fahaverezan'ny vokatra ara-pambolena ka nampitombo ny fahantran'ny tokantrano sy ny voka-dratsiny. Inona no ataontsika mba hisorohana ity loza mitatao ity?
Manomboka amin'ny sehatra ivelany mankany amin'ny Google Earth
Azo hamarinana avy eny amin'ny toerana ambony ny fanaraha-maso eny ifotony. Ny toerana no fanombohana hanaovana ny fanaraha-maso sy fanadihdiana ny tany amin'ny ankapobeny. Sarotra ny mipetraka eo amin'ny sambon-danitra, saingy mora kosa anefa ny mahita sary amin'ny zanabolana amin'ny aterineto avy eny ambony.
Ankoatra ireo sampana an'habakabaka sy orinasa manome tolotra ho an'ny fikambanana tsy miankina, namorona ny atlas antserasera ireo mpahay siansa sy olon-tsotra, ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Tontolo Iainana mba hanamarihana ireo fiovana nitranga tany amin'ny faritra samihafa manerana an'izao tontolo izao nandritra ny folo taona. Ny sary zanabolana rehetra dia azo jerena ao amin'ny glaoby virtoaly an'ny Google Earth, araka ny tatitra ofisialin'ny blaoginy:
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta Danoà sy ny hafa, dia nanomboka andiana fitsidihana ny Google Earth izahay mba ahafahanao mamantatra ny mety ho fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro eo amin'ny planetantsika sy ny vahaolana amin'ny fitantanana izany.
Betsaka ny loharanom-baovao azo jerena ao amin'ny bilaogy sy tranonkalan'ireo fikambanana iraisam-pirenena. Ry mpamaky, aza misalasala mametraka ny loharanom-baovaonao manokana ao amin'ny zoro fanehoan-kevitra.
Siansa ho an'ireo mpanapa-kevitra
Ny fandinihana no lohahevitra fototra ho an'ireo mpanapa-kevitra. Nanatontosa fanadihadiana ny governemanta mba hahatakatra ny tranga sy ny fomba hanamorana ny fiantraikany.
Nanomboka fandaharan'asa an'habakabaka ny Vaomiera Eoropeana sy ny Sampana An'habakabaka Eoropeana tamin'ny taona 1998, nantsoina hoe Global Monitoring Environmental Security (Fanaraha-maso manerantany moba ny fiarovana ny tontolo iainana) (GMES) izay mikendry hisoroka ireo fiovana ara-potoana avy amin'ny tahiry loharanom-baovao marobe. Tokony hanao tatitra ny tetikasa amin'ny taona 2014, hahitana ny tovana ara-piarovana.
Ny firenena andalam-pandrosoana no tena voakasika mivantana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ka nandray dingana mitovy tahaka ireo zanabolana vao haingana natao tao India mba hanadihady ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ny vaovao tahaka izany no afaka manampy ireo firenena hanomana politika vaovao ara-tontolo iainana sy ara-toekarena.
Any Afrika Atsimo, noforonina indrindra ho amin'ity tanjona ity ny fitaovana vaovao momba ny toekarena. Mitatitra ny AllAfrica:
Ankehitriny, novolavolaina ny fitaovana fanadihadiana mifototra amin'ny fikarohana, Mandrakitra An-tsaritany ny Sehatra Fambolena ao Afrika Atsimo izay Marefo amin'ny Fikorontanan'ny toetr'andro sy ny Fiovaovany, mba hanampiana ireo mpandinika politika hamantatra ireo vondrom-piarahamonina tena marefo amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manampy azy ireo hiomana amin'ny fepetra ara-pambolena samy hafa.